Meizu 16X: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Meizu 16X: Uzo ohuru ohuru ohuru bu ugbu a
Edere Ferreno | | Meizu, Mobiles
Anyị na-eche ọbịbịa nke Meizu 16X maka izu, ọ bụ ezie na ngosi ya na-egbu oge na nkeji ikpeazụ. Ma n'ikpeazụ, taa, September 19, e gosipụtara ya ekwentị ọhụrụ si n'aka ndị na-emepụta China. Anyị na-eche ihu ihe nlele nke ruru ogo etiti nke onye nrụpụta. Ekwentị nke na-apụta maka ọnụnọ nke akara mkpisiaka na ihuenyo.
Meizu 16X a anaghị ada mbà ma a bịa na ntule. Qualitydị mma, yana atụmatụ dị ugbu a na nke ahụ nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịbanye n'ahịa na Europe. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị a?
N'ime izu ndị gara aga, anyị enweela ọtụtụ mkpuchi banyere ekwentị. N'ihi nke a, anyị nwererịrị echiche siri ike banyere ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ụdị a, nke na-eme ka etiti ụlọ ọrụ ahụ dị elu. Akụkụ na-eto eto na ahịa.
1 Nkọwapụta Meizu 16X
Nkọwapụta Meizu 16X
Ekwentị a ọ bụ otu ọkwa karịa nkezi nke ndị na-emepụta China. Ha na-agbaso usoro yiri nke anyị na-ahụ na ụdị ndị China ndị ọzọ, nke na-ebupụta ụdị dị mma karịa ndị ọzọ dị adị, dị ka nke a. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Meizu 16X:
Ihuenyo: AMOLED 6 sentimita asatọ na mkpebi 2160 × 1080 pikselụ na nha 18: 9
Ihe nhazi: Qualcomm Snapdragon 710 Octa Core nwere nkpuru asatọ emere na 2.2 GHz
Kaadị eserese: Adreno 616
Esịtidem nchekwa: 64 / 128 GB
Igwefoto na-aga n'ihu: 12 + 20 MP nwere oghere f / 1.8 na f / 2.6 6-ụda LED flash x3 mbugharị na OIS
Batrị: 3.100 mAh na ngwa ngwa
System: Android 8.0 Oreo na Flyme OS dị ka oyi akwa nhazi
Njikọ: 4G / LTE, Bluetooth 5.0, USB-C,
ndị ọzọ: On na ihuenyo akara mkpisiaka na ọdịdị ihu ude
Akụkụ: 73.5 x 151 x 7.5 mm
Ibu ibu: 154 grams
Meizu 16X bụ otu n'ime ụdị zuru oke nke akara ahụ gosipụtara. Ọ bụ ekwentị nwere ahụ igwe, nke na-enweghị ihu igwe ọhụụ. Akara ndị China ahọrọla maka ihuenyo nwere okpokolo agba na akara 18: 9. Ọ bụ na ihuenyo a ka akara ahụ gosipụtara ihe mmetụta mkpịsị aka. Anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị na ahịa na atụmatụ a.
Mbinye aka ahọrọla Snapdragon 710 dị ka ihe nhazi, nhazi nke emere maka ụdị nke etiti etiti a. Ihe nhazi dị ike karịa nke dị na 600, nke ga-enye ekwentị a ike na ahụmịhe onye ọrụ na-eji ire ụtọ. Yabụ ndị ọrụ ga-enwe ike iji ekwentị a mee ihe.
Dị ka a ga-atụ anya na nso a, igwefoto azụ dị okpukpu abụọ. Oghere ahụ pụtara ìhè nke ọma, nke kwesịrị inye anyị ụfọdụ ezigbo foto maka igwefoto ndị a. Ọ bụ ezie na ugbu a anyị enweghị onyonyo ndị ejirila ha.
Mwepụta nke Meizu 16X a na China ga-eme n'ụbọchị iri abụọ na isii nke ọnwa a. Yabụ n'ime otu izu ị nwere ike ịzụta na mba ahụ. N'oge a gosipụtara naanị agba abụọ nke ekwentị a, na ụda ojii na ọla edo / bilie otu. Amabeghị ma ọ bụrụ na enwekwu agba ga-adị n'oge ụfọdụ, yabụ anyị nwere olile anya ịnweta data karịa na nke a.
Dị ka atụ anya, ọnụahịa ekwentị dị ala. E nwere ụdị abụọ nke ngwaọrụ a, dabere na njikọ RAM na nchekwa ya. Ahịa nke nsụgharị ndị a:
Dị nke nwere 6/64 GB: 2098 yuan (ihe dị ka euro 260 ịgbanwe)
Dị nke nwere 6/128 GB: 2398 yuan (ihe dị ka euro 300 ịgbanwe)
N'oge a enweghị ihe ekwuru banyere mwepụta nke Meizu 16X a na Europe. N'ihe mgbasa ozi ụfọdụ, a na-ekwu na e nwere ahịa na kọntinent ahụ, dị ka Poland, ebe o yiri ka a ga-amalite ya. Mana ika ahụ enwebeghị ọnụnọ na Europe ma, nke nwere ike ịme ka o sie ike ịmalite. Ọ bụ ezie na ruo ugbu a ọ nweghị ihe ekwuru na nke a.
Ka ọ were anyị na-atụ anya ịmatakwu banyere mmalite ya n'oge na-adịghị anya. Ebe ọ bụ na nke a bụ ihe atụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na Europe, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-eme ọnụahịa dị ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Meizu » Meizu 16X: Uzo ohuru ohuru ohuru bu ugbu a
Xiaomi na-arụ ọrụ na igwe onyonyo atọ na Android TV